Mpanohitra Teny an-tserasera - Manisa teny | Famoronana an-tserasera
Counter Word Online - Manisa Teny
Ity fitaovana manaraka ity dia mamela manisa ny isan'ny teny ao anaty lahatsoratra haingana sy mora. Mila manoratra fotsiny ny lahatsoratra amin'ity boaty manaraka ity ianao ary mametaka ny bokotra fanisana:
Tsy mila fisoratana anarana. Manisa ny isan'ny teny ao anaty lahatsoratra ao anatin'ny segondra vitsy noho ny anay counter teny amin'ny Internet.
Toy ny hoe nanampy izany, manana koa isika mpanelanelana amin'ny Internet toetra.
1 Ahoana ny fampiasana ny teny hoe counter?
2 Inona no hatao raha tsy mety amiko ilay mpanohitra teny amin'ny Internet?
Ahoana ny fampiasana ny teny hoe counter?
Ny asan'ny mpanohitra teny Tsotra tokoa no arosonay aminao: tsy maintsy mandika sy mametaka ny lahatsoratra ao anaty boaty etsy ambony ianao, ary tsindrio ny bokotra fanisana.
Avy hatrany dia hisy hafatra hiseho miaraka ny isan'ny teny totaliny anisany ny lahatsoratra na lahatsoratra nataonao. Ny tsara indrindra dia izany tsy misy fetra teny, mba hahafahanao mametraka votoaty araka izay tianao.
Raha mila torohevitra ianao dia mamporisika anao handika sy hametaka ny lahatsoratra amin'ny alàlan'ny baiko izay hahafinaritra anao indrindra: Ctrl + C (handika lahatsoratra) ary Ctrl+V (apetaho ao amin'ny fitaovantsika).
Inona no hatao raha tsy mety amiko ilay mpanohitra teny amin'ny Internet?
Raha toa ka tsy mandeha araka ny tokony ho izy ilay fitaovana dia manana safidy hafa isan-karazany isika. Fa ny tena tianay indrindra dia ny fampiasana Microsoft Word, izay ahitanao ny diman-tongotra, na eo ambanin'ny fitaovana, ny isan'ny teny misy ny antontan-taratasinao.
Na izany aza, azonay antoka fa miaraka amin'ity pejy ity ianao dia hanana ny zavatra rehetra ilainao isao ireo teny ao amin'ny antontan-taratasinao, noho izany mamporisika anao mafy izahay hanandrana ny fahaizany.
Ilaina indrindra izany raha mila mahatratra fetran'ny teny ianao amin'ny taratasy, TFG, fitsapana anglisy, na lahasa hafa mila teny farafaharatsiny mba ekena. Noho ny fitaovanay dia azonao atao ao anatin'ny segondra vitsy.